musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nyowani hutungamiriri timu yakaziviswa naAprecia
Kyle Smith akasarudzwa kuve Mutungamiriri uye Chief Operating Officer weAprecia Pharmaceuticals, LLC, inoshanda pakarepo. Mr. Smith murwi wemakore gumi naAprecia uye akashanda seMutevedzeri weMutungamiriri weOparesheni kwemakore matatu apfuura. SaMutungamiriri uye Chief Operating Officer, VaSmith ndivo vanozove nebasa rekutungamira kwezuva nezuva zvebhizinesi zviitiko.
Aprecia akaenderera mberi nekusimbisa timu yavo yehutungamiriri nekusimudzira Patrick Staudt kuve Mutevedzeri weMutungamiri weZvekushanda, inoshanda nekukasira. A makore gumi nemana murwi weAprecia, Mr. Staudt akatungamira iyo East Windsor, NJ yekugadzira mashandiro kweanopfuura makore gumi uye aratidza tarenda uye ruzivo kutungamira kunotarisirwa, kuwedzera kukura kuburikidza neakawanda matekinoroji mapuratifomu.
Mr. Smith naVaStaudt vanga vari mabwe ekona enhoroondo yaAprecia yehunyanzvi uye hunyanzvi hwekugadzira. Ivo vanga vari vakakosha vanobatsira mukumisikidza kambani semutungamiri mukuvandudza nekugadzira zvigadzirwa zvemishonga kuburikidza ne3D-Printing. Zvakaitika kwavari naAprecia zvakabatsira kugadzira tsika yekambani uye 3DP mishonga yekugadzira zvigadzirwa, uye mipiro yavo yakagadzira simba rinoramba richikurumidza kuburikidza nehukama hwakakosha uye zvigadzirwa zveinovel.
"Sezvo mapuratifomu eAprecia ehunyanzvi achiwedzera uye kudyidzana kwemaindasitiri kuchifambira mberi, Aprecia inoda tarenda uye zviwanikwa zvekuzadzisa zvido zvinokura izvi," akadaro Chris Gilmore, Chief Executive Officer waAprecia. "Tine rombo rakanaka kuva neaya mazvikokota nyanzvi dzehunyanzvi nevatungamiriri vemakambani kusimudzira nekutungamira kukura kwesangano mune ramangwana."
VaKyle Smith vane Master of Business Administration degree kubva kuMiami University, uye Bachelor yeSainzi muChemical Engineering kubva kuGeorgia Institute of Technology.
VaPatrick Staudt vane Bachelor of Science degree muBiomedical / Medical Engineering kubva kuDrexel University.